Kismaayo News » Madaxweynaha Jubaland: “Shaqsiyan ma aaminsani federaalka”
Madaxweynaha Jubaland: “Shaqsiyan ma aaminsani federaalka”
Kn: Madaxweynaha Dowlad Gobaleedka Jubbaland Mudane Axmed Maxamed Islaam ayaa sheegay inuusan shaqsiyan rumeysneyn federaalka Soomaaliya lagu wado, isla markaana ujeedka aanu ahayn in dalka la sii kala qeybiyo ee loo socdo dowlad mid ah.
Madaxweyne Axmed oo ka qayb galay xaflad soo dhoweyn ah oo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo loogu sameeyay magaalada London ka hor shirweynaha arrimaha Soomaaliye ee London ayaa si dareen leh uga hadlay sida madaxda Soomaaliyeed uga go’antahay midnimada shacabka Soomaaliyeed.
“Waxaa laga hadlaa madaxweynayaal badan iyo states- anigu waxaan ahay dadka aan rumeysneyn Federaalism-ka,……………………… , inkasta oo uu hadal fiican ahayn waxaa la yiri nin dameer dabadiis ka degay dan buu mooday, in State-yo aan sameyno waxaan dan u moodnay inaan marka hore meel walbo lasoo dhiso kadibna hal meel isugu wada nimaadno , mahan inaan dan kale ka leenahay, madaxweynayaasha badan waa ka gudbi doonaa”.
Mar qura ayaa jawiga hoolka Xafladdu ka dhaceysay ayaa waxaa isla qabsaday sacab taasoo muujineysa in shacabka Soomaaliyeed ay madaxweynaha Jubaland sidii caadadiisa ahayd ka maqleen war uroon dhagahooda.
Sidoo kale madaxweynaha Jubaland ayaa qurbojoogta Soomaaliyeed ugu mahadceliyay gacantoodii hagar la’aanta ahayd ee ay ka gaysteen abaarihii dalka ka dhacay sidoo kalena uga digay khatarta ay leedahay qabyaallada kuna booruiyay inay sii wadaan doorkooda kor uqaadista dalka.
“Qurba-joogta waxaan uga mahadcelinaya gacantii ay ka geysteen gurmadkii abaaraha, waxaanse idiinku daraya wadankaan cidna uma maqna ceelna uma qodna, haddii lexe jeclo laga leeyahay intaasi ma qaadateen, caalamka malaha tijaabaan ugu jirnaa waxaa la rabaa in la inagu tijaabiyo inta dowladd la’aan la noolaan karayo… ayuu yiri Axmed Maxamed Islaam.
”Waxaan u nimi inaan idini muujino midnimo, micno sameyn mayso shir lagu qabtay London, mid lagu qabtay Paris iyo Istanbul, madaxda Soomaaliyeedna micno uma leh, waxaa ugu muhimsan waa midnimada raadinteeda hogaaminta iyo system-kaasi inuu dhisanyahay.
Ugu dambeyntii dhammaan madaxda dowlad gobaleedyada dalka ayaa garab istaagay madaxweynaha Jamhuuriyadda federaalka iyagoo xusay in hadafka ay ka wada simanyihiin ay dalka ku hagi doonaan dhabbaha hormarka.